Apple Mahazo Privaris Touch-ID Patent | Avy amin'ny mac aho
Apple dia mandresy patanty mifandraika amin'ny Touch-ID avy amin'ny orinasa biometric Privaris
Apple dia miasa mba hahazoana ny zon'ny patantin'ny orinasa fiarovana biometrika monina any Virginia any Charlottesville, antsoina ny fiainana manokana, araka ny notaterin'ny CNN. Vao nifindra i Privaris 26 amin'ny patanty 31 ho an'i Apple, ao anatin'izany Patanty 4 tamin'ny Desambra 2012 ary a am-polony maro tamin'ny oktobra 2014.
Ireo patanty dia mifandraika indrindra amin'ny dian-tànana, ampiharina amin'ny efijery mikasika izay mety hitarika azy hanatsara ny Touch-ID an'ny fitaovana ho avy. Tamin'ny volana febroary lasa teo, ilay mpandalina Ming-Chi Kuo, nilaza tamin'ny mpampiasa vola fa ny iPhone manaraka dia hanana a Nihatsara ny Touch-ID misy lesoka mihena.
Ohatra, ny patanty Privaris dia manarona ny fahaizana mampiasa mpamaky efijery sy mpamaky rantsan-tànana miaraka amin'izay. Ny patanty Privaris hafa dia hamela manokatra varavarana iray miaraka amin'ny iPhone amin'ny alàlan'ny fitiliana ny dian-tananareo, mitovy amin'ny fandoavan'ny Apple Pay.
Mikasika ilay orinasa 'Privaris', misy ny tsaho milaza fa Apple nahazo ity orinasa ity indraindray tamin'ny taona lasa. Na izany aza, tsy misy filazana fa izany no izy. Tsy nanova ny mombamomba azy ireo mpitantana privaris mba hampisehoana toerana vaovao ao amin'ny Apple, ary na ny tranokalan'ny orinasa biometrika aza tsy nohavaozina nanomboka ny taona 2010. Azo inoana, Privaris dia te-hiala amin'ity orinasa ity ary Apple dia miasa mba hahazoana ny portfolio-patanty.
Tamin'ny volana febroary tamin'ity taona ity, araka ny efa noresahiko teo aloha, tatitra iray nomen'ny mpandalina Ming-Chi Kuo, izay nanambarany fa hampiditra na dia sensor avo lenta kokoa an'ny Touch-ID aza ato ho ato, ary ireo fahazoana patanty ireo dia afaka manampy amin'ny fanatanterahana izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Apple dia mandresy patanty mifandraika amin'ny Touch-ID avy amin'ny orinasa biometric Privaris
Apple Watch 42mm azo alefa ao anatin'ny 1 - 2 herinandro
AppleCare + dia efa manarona ny fanoloana batterie izay tsy mahatratra 80% amin'ny fahaizany tany am-boalohany